Wararkii ugu dambeeyay Shabaab oo weeraray Afgooye – War La Helaa Talo La Helaa
Wararkii ugu dambeeyay Shabaab oo weeraray Afgooye
Xoogag ka tirsan ururka Al-shabaab ayaa fiidnimadii xalay waxa ay weerar saf balaaran ah ku qaadeen fariisin Ciidanka Dowladda ay ku leeyihiin xaafada Buula-fooliyo oo ka tirsan degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Dagaalkan oo qaatay wax ku dhow saacad ayaa labada dhinac waxa ay isku adeegsadeen hubka nuucyadiisa kala duwan, kadib Ciidamada Dowladda oo helay gurmad ayaa u suuragashay in ay iska caabiyaan Shabaabkii weerarka soo qaaday.
Inkastoo ilaa hadda aanan si dhab ah loo ogeyn khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkan, ayaa hadana wararka soo baxaya waxa ay sheegayaan in laba Askari oo ka tirsan Ciidanka Dowladda lagu dhaawacay dagaalkan.
Sidoo kale Shabaab ayaa weeraray degaanka Tixsiile oo ku yaalla duleedka degmada, waxaana halkaasi ka dhacay weerar saacad qaatay, kadib markii halkaasi uu dagaal kooban ku dhexmaray Shabaabkii weerarka soo qaaday iyo Ciidamada Dowladda ee halkaasi ku sugnaa.
Dadka degaanka oo inala soo xiriiray ayaa inoo sheegay in ay arkeen meydadka dhowr qof oo yaallay goobta uu dagaalka ka dhacay, kuwaasi oo isugu jiray labada dhinac ee dagaalka uu dhexmaray.
Al-shabaab oo weerarka Tixsiile uga hadlay baraha ay wararkooda ku faafiyaan ayaa waxa ay sheegeen in ay la wareegeen gacan ku heynta degaanka, sidoo kalena ay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah gaarsiiyeen Ciidamada Dowladda ee fariisinkaasi ku sugnaa, inkastoo aysan jirin ilo rasmi ah oo xaqiijinaya sida ay wax uga dhaceen halkaasi.
Cabsi xoogan ayaa soo wajahday shacabka ku nool degmada Afgooye gaar ahaan dhalinta, kadib markii 24 saac ee la soo dhaafay degmadaasi lagu dilay Saddex qof oo laba ka mid ah ay ahaayeen dhalinta degmada halka midka kalena uu ahaa Askari.
Dhammaan dilalkaas waxaa masuuliyadooda sheegtay Shabaab, labada dhalinyarada ah ayaa waxa ay ku eedeeyeen in ay ka tirsanaayeen Ciidanka Nabad Sugidda Dowladda Federaalka, taasi oo qasabtay in goobaha lagu caweeyo ay faaruq noqdaan fiidkii hore, maadaama ay kordheen dilalka qorsheysan ee ay geysanayaan kooxaha hubeysan.
Ururka Al-Shabaab, ayaa u muuqdo kuwo kordhiyay weerarada ka dhanka ah Degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose, iyadoo weeraradan ay baqdin ku abuureen dadka degaanka.
Ilaalada Madaxweyne Farmaajo oo laga hor istaagay in ay dhaafaan Gudinlabe